"Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee qalmaaf hin qopheessine'' - Guyyoo Waariyoo - BBC News Afaan Oromoo
"Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee qalmaaf hin qopheessine'' - Guyyoo Waariyoo
15 Adooleessa 2020
Abbaan Alangaa OMN Haacaaluun qaamni Shanee jedhamu isa doorsisaa jiraachuu bakka ibsu keessaa kutee tamsaasuu hime
‘’ABO Shaneerraa irra deddeebiin dorsifni ajjeechaa irra gahaa akka ture artistichi dubbatus kun ta'e jedhamee keessaa cite hafeera’’ jedhan aanga'aan waajjira Abbaa Alangaa Obboo Fiqaaduu Tsaggaa.
"Siyaasa keessatti akka hin hirmaanneef 'shira nurratti xaxamedha'"
Haacaaluun 'sodaa malee warra aangoo qaban dura dhaabbachuu nu barsiise'
Eenyu akka isa doorsisu gaafadhee maqaa dhahee deebii naaf hin kennine kan jedhu gaazexeessaan kun silaa maqaa dhaheera ta'ee hin hafu ture jedha
Duuti artiist Haacaaluu du’a nu hundaatii kan jedhu Guyyoon, "af-gaaffiin sun Art. Haacaaluufi saba bal’aa walitti fidee dhugaan Haacaaluu akka mul’atuuf gahee olaanaa tapahatee jedheen yaadaa" jedha.
Af-gaffiin sun feesbuukii irratti kallattiin yoo darbu namni 24,000 ol caqasaa turuu, saniin boodas yaadni gaggaariin kennamaa waan tureef hojii kanaaf 're’ee naa qaluu qabda' jedhee itti qoosaa turuullee hima Guyyoon.
Qe'een maatii isaa Godina Booranaa keessa jiran sakatta’amuufi Guuyyoon as dhokate jira fidaa jedhamanii dorsifamaa akka jiran himeera.
Gaazexessitootni tokko tokko nageenya isaaniif yaadda'anii mana jireenyaa isaanii keessaa bahuun bakka biraa dhokatanii akka jiran hima Obbo Girmaan.
Poolisiin waajjira isaanii sakatta'uun waan barbaadan keessaa fudhatanii cufuu fi ergasii gara waajjirichaa deemanii akka hin beekne dubbatan.
Girmaan manni isaa sakatta'amuun amma achii bahee bakka biraa akka jiruu dubbata.
Mootummaan OMN sabaa fi amantaa jidduutti jibba labsuun walitti bu'iinsaaf kakaasaa ture jechuun himata.
Obbo Girmaan garuu kuni dhara ta'uufi cufamuun OMN ergama siyaasaa qabaachuu hima.
''Odeeffannoo akka miidiyaa keenya cufan qabna. Kun ajandaa waggaa lamaaf deemaa turedha. Jawaar nurraa hiitan malee OMN nurraa cuftan malee jechuun paartiin naannoo Amaaraa bulchu gaafachaa ture."
''Gaazexessitootni keenya oduu tokko yeroo hojjetan gamtokkee karaa taheen hin hojjetan. Addatti oduu yoo tahe."
"Wal gahii adda addaa irratti namootni yoo dubbatan yaada isaanii ni dabarsina. Kun ammoo qabiyyee uummataati. Kun namoota kaan tokko tokkos aarsuu danda'a.''
OMN weerara Covid-19 ittisuuf jecha afaanota 18'n tamsaasaaa akka ture himuun inumaa waajjiricha mana sabaa fi sab-lammootaa goone jechuun walitti bu'iinsa sabaan himatamuun sirrii akka hin taane dubbata.
Baqqalaa Garbaa: "Siyaasa keessatti akka hin hirmaanneef 'shira nurratti xaxamedha'"
14 Adooleessa 2020
Alii Birraa: 'Haacaaluu Hundeessaa waliin 'lubbuun keenya tokko,' duuti isaa hedduu na hubde'